Mapiritsi epenzura akanakisa e2022: dhirowa kana kunyora zvakasununguka
Imwe yemabhenefiti makuru ekuva nehwendefa ine chinyoreso chekubata ndechekuti inobvumidza iwe kutora manotsi sekunge ari pabepa, dhirowa, uye uve nekutonga kwakakura kupfuura nemunwe wako, sezvo uchigona kuve neinongedzo yakakwenenzverwa uye yakanyatsojeka. . Inogona zvakare kuve yakanakira kunyora pasi zvinyorwa, kutora manotsi, kugadzira maratidziro, nezvimwe. Chiteshi chine simba chekuvandudza hunyanzvi hwako nekunyaradza kukuru ...
1 Mapiritsi akanakisa ane chinyoreso
1.1 Samsung Galaxy Tab S7 + S-Peni
1.2 Apple iPad Air + Apple Penzura yechipiri Gen
2 Chii chingaitwa nehwendefa nepeni?
3 Matablet pen ese akafanana here?
Mapiritsi akanakisa ane chinyoreso
2020 Apple iPad Mhepo (kubva ...
2021 Apple iPad Pro (kubva ...
Kana ukafunga kutenga piritsi nepenzura, une mamwe anokurudzirwa mhando dzausingazodemba:
Samsung Galaxy Tab S7 + S-Peni
Imwe yemapiritsi akanakisa pamusika pasina mubvunzo ndeye Samsung Galaxy Tab. Iyi modhi yeS7 zvakare ine hombe 11 ”screen ine QHD resolution, uye 120 Hz yekumutsiridza mwero. Iwe unogona kusarudza neWiFi uye WiFi + LTE yekubatanidza, pamwe nekukwanisa kusarudza pakati peiyo 128 GB modhi uye 256 GB yemukati yekuchengetedza modhi.
Iyo inouya yakashongedzerwa neApple 10 ine mukana wekuvandudza, pamwe nezvimwe zvinoshamisa hardware. Iine ine simba Qualcomm Snapdragon 865+ yepamusoro-performance octa-core chip, ine simba Adreno GPU, 6 GB yeLPDDR4x RAM, 8000 mAh bhatiri reLi-Ion rinogara kwenguva refu ine 45W inokurumidza kuchaja rutsigiro, vatauri vane Dolby Atmos vanotsigira AKG, uye gumi nematatu uye 13 MP kamera.
Iyo inosanganisirawo yakakurumbira S-Pen, Samsung's dijitari peni yekunyora kana kudhirowa, ine chaiyo chaiyo uye yakaderera latency kuita kuti zvese zvinyanye kumhanyisa. Dhizaini yakatsvinda, isingaremi ine bhatiri rakavakirwa-mukati kwenguva refu. Iyi modhi ine zvakare yakashongedzerwa yakanaka uye inonzwisisika tipi, uye nehuwandu hwehungwaru mabasa ekutora manotsi, kuzivikanwa kwekunyora, nezvimwe.
Apple iPad Air + Apple Penzura yechipiri Gen
Kana ukafunga nezveApple iPad Air, saka unogona kuvimba nehwendefa rakavimbika uye rakasimba, rine hombe 10.9 ”Retina-type skrini ine yakakwira pixel density yemifananidzo yakapinza uye yemhando yepamusoro. Iyo zvakare ine iPadOS 15, Apple's sisitimu yekushandisa iyo inokupa iwe yakagadzikana uye yakachengeteka chikuva chebasa rako uye kuzorora.
Apple Penzura (1 ...
Panyaya yehardware, inouya yakashongedzerwa neA14 Bionic chip ine Neural Injini yekumhanyisa software nekukurumidza uye nekumhanyisa mabasa ehungwaru hwekugadzira. Bhatiri rayo rine hupenyu hurefu hunosvika maawa gumi, uye inosanganisira 10 MP kumashure kamera, uye 12 MP FaceTimeHD pamberi pekamera, pamwe neTouchID sensor.
Penzura yayo, iyo Apple Penzura, yakangwara uye iri nyore kushandisa kunyora, kudhirowa, kana kushandura maturusi nekubata nyore. Iyo ine minimalist dhizaini uye kupera kunonakidza kubata. Zano rayo rakanaka, nekunyatsojeka uye kunzwa, uye huremu chaihwo huremu. Kana iri bhatiri rayo, zvakare inobvumidza iwe kushanda kwenguva yakareba pasina kukanganisa ...
Imwe nzira ndeye MatePad 11 piritsi kubva kuChina Huawei. Iyi modhi inokwanisika zvakanyanya, asi ine maficha makuru. Inosanganisirawo chivharo chekudzivirira uye 11 ”screen uye 2.5K FullView resolution ine refresh rate ye120 Hz. Chidzitiro chemhando yepamusoro chakagadzirirwa kukuvadza kuona kwako zvishoma sezvinobvira.
Inosanganisirawo Qualcomm Snapdragon 865 processor ine 8 high-performance cores, Adreno GPU yekufambisa magirafu agilely, 6 GB RAM, uye 64 GB yekuchengetedza, kunyange zvazvo inogona kuwedzerwa. Inosanganisirawo Bluetooth uye WiFi 6 yekubatanidza kune inokurumidza kubatana. Bhatiri rayo rinobvumirawo nguva yakareba, ine USB-C kuchaja, kunakidzwa neHarmonyOS kwemaawa.
Kana iri penzura yayo, iyo Capacity M-Pen, iri capacitive mudziyo une yakasarudzika dhizaini mune simbi yegrey color, huremu hwakareruka, uye nekunzwa kukuru kumanikidziro. Ichakubvumidza kuti utore marudzi ese ekufamba neruoko, kudhirowa, kunongedzera, kuisa mavara, kunyora, nezvimwe, nebhatiri rinogara kwenguva refu.
Chii chingaitwa nehwendefa nepeni?
Tafura ine chinyoreso inobvumira zvimwe zvivakwa zvausina pamunwe wako kana iwe ukashandisa yekubata-bata nemunwe wako, uye izvo zvinogona kunakidza zvakanyanya kune vamwe vashandisi uye nyanzvi. Semuyenzaniso:
Kunyorera piritsi: nekushandiswa kwepenzura iwe unogona kunyora kana kutora zvinyorwa zviri nyore uye nekukurumidza sezvaungaita pabepa kana bhuku rekunyorera. Imwe nzira yekudzivisa kushandisa pa-screen keyboard, iyo isiri iyo inonyanya kushanda. Unogona kushandisa piritsi rako sechirongwa, kuti vana vadzidze kunyora, nezvimwe.
Tablet yekudhirowaKunyangwe iwe uri fan yekudhirowa, kana nyanzvi (mugadziri, animator, ...), pamwe nemwana ane shungu nekudhirowa, iwe zvechokwadi uchada kutora penzura yako uye kusunungura fungidziro yako, kudhirowa marudzi ese ezvinhu muchiratidziro. kuita digitize, kupendesa, kugadzirisa, kudhinda, nezvimwe. Uye zvakare, iwe une huwandu hukuru hwekugadzira maapplication aunawo, uye kunyange mandalas ekupenda uye kuzorora, nezvimwe. Penzura yako inogona kushandurwa nekubata nyore kuita bhurashi remhepo, marasha, bhurashi, chinomaka, kana chero chaunoda ...
Tablet yekunyora manotsi: kana iwe uri mudzidzi uye uchida kutora manotsi nokukurumidza, nehwendefa iwe unogona kunyora nemaoko uye kutora mifananidzo kana madhayagiramu kuti uzvichengete mumutauro we digital. Izvi zvinokutendera iwe kurodha zvinyorwa zvako kune gore kuti zvisarasika, zvidhinde kuti zvidzidze, zvigovane nevamwe vaunoshanda navo, zvibatanidze, nezvimwe. Mukuwedzera, penzura pachayo inogona kukubvumira kunyora zvinonyorwa pamagwaro kana kuti kutara mutsetse mukati mefundo.
Digital bureaucracy: ungangoda kuchengetedza bepa mubhizinesi rako, uye kana zvakadaro, kune zvinyorwa zvekutarisira zvinyorwa zvaunogona kuva nazvo mafomu nemamwe mapepa aunogona kutsigira nekusaina nerudzi urwu rwepenzura.
Kubhurawuza kwezuva nezuva-Kana iwe uine stylus, unogona kuishandisa kufamba-famba graphical menyu zvine hunyoro hwakakura kupfuura kana uchizviita neminwe yako. Chokwadi nguva zhinji zvakaitika kwauri kuti wakabata bhatani kana tsamba netsaona nekuti vari padhuze pamwe chete ...
Matablet pen ese akafanana here?
Haasi ese mapenzura emapiritsi akafanana, uye kwete chete nekuda kwemhando iyo mamwe mabhureki uye mamwe angave nawo. Panewo zvimwe zvakasiyana. Mazhinji capacitive mapeni ane generic, anobatana neBluetooth kune chero inotsigirwa piritsi modhi.
Nekudaro, mamwe akananga kune imwe mhando yehwendefa. Iyo yekupedzisira, senge Samsung's S-Peni, Apple Penzura, nezvimwewo, inodhura, asi ichokwadi zvakare kuti inosanganisira mamwe mabasa. Semuyenzaniso, magenerics anowanzo shanda sechinongedzo chekubatana ne touch screen, kana kudhirowa kana kunyora, asi ane zvishoma.
Kusiyana neizvi, mapenzura akanyanya kukosha ane sensitivity kune kudzvanywa, kurereka, kana kunzwa kune mamwe maitiro kana kubata. Izvi zvinovhura mikana yakawanda yakawanda, yakadai se:
Pindura paunowedzera kudzvanya sezvingaitika pamutsetse nepenzura chaiyo kana chiratidzo.
Shandura sitiroko paunorereka penzura zvakanyanya kana zvishoma.
One-touch mabasa, sekuchinja basa kana maturusi ekudhirowa paunenge uchishanda neapp, nezvimwe.
Muchidimbu, mapenzura aya anoita kuti chiitiko chacho chifanane zvikuru nechaizove penzura chaiyo, iyo isingawanzoita sitiroko yakaenzana zvichienderana nekudzvanywa, kurerekera, nezvimwe.
Mahwendefa akadhura » Mhando » Tablet ine pen
Mahwendefa ane SIM kadhi